जोडोयाममा हृदयघातको बढी खतरा, सजक रहन डाक्टरको आग्रह – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
जोडोयाममा हृदयघातको बढी खतरा, सजक रहन डाक्टरको आग्रह
प्रकाशित मिति : २०७४ पुस ६
काठमाडौं, ६ पुस । देशभर चिसो बढेको छ । तराईका जिल्लामा शीतलहर र उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा बाक्लो हिमपात सुरु भइसकेको छ । चिसोमा स्वास्थ्यको ख्याल गर्न नसके हृदयघात हुने खतरा धेरै हुने डाक्टरले बताएका छन् । मुटु रोग विशेषज्ञ डा. प्रेमराज वैद्यका अनुसार चिसोले हृदयघात र मुटुरोग बढाउँछ ।
चिसोले शरीरका नसा खुम्चिने हुनाले हृदयघातको सम्भावना भएकामा हृदयघात, मस्तिष्क घात हुने र मुटु बिगे्रका बिरामीलाई निमोनिया, उच्च रक्तचापको समस्या बढी हुने डा. वैद्यले बताउनुभयो । विभिन्न अध्ययनले पनि चिसो समयमा नै हृदयघात हुने र मुटुका बिरामी समस्यामा पर्ने गरेको देखाएको छ । चिसोले फोक्सोमा असर गर्ने हुँदा रक्तसञ्चार प्रवाहमा असर पर्न जान्छ । जसले गर्दा मुटुका रोगीलाई समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै जाडो महिनामा नै श्वासप्रश्वास नलीबाट ब्याक्टेरिया पनि छिर्ने र यसले फोक्सोमा समेत संक्रमण हुने र मुटुमा थप समस्या पर्ने डाक्टरले बताएका छन् । चिसोमा कतिपयले बढी नुनिलो, चिल्लो र चुरोट खाने गरेकाले पनि मुटुको रक्तचाप बढ्ने गरेको पाइएको छ । डाक्टरहरुका अनुसार खानपानमा ख्याल गरी न्यानो कपडा र झोलिलो खाने कुरा खाए जाडो महिनामा लाग्ने सम्भावित रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
यसैबिच,तराईमा चिसो बढ्न सक्ने अनुमान रहेकाले सचेत रहन मौसमविदले आग्रह गरेका छन् । शुक्रबारदेखि फेरि तापक्रम घट्ने मौसमविद विभूति पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार देशका धेरै ठाउँमा बुधबारदेखि आंशिक बदली मात्रै भएकाले अरु दिनको तुलनामा अहिले केही न्यानो छ । तर पश्चिमी वायूको प्रभावले फेरि तापक्रम घट्ने सम्भावना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ब्लाडर क्यान्सर के हो ? जानौं यसको ९ तथ्य
काठमाडौं । क्यान्सरसँग हामी अझै भयभित छौ । आधुनिक...
के एचआभी संक्रमित आमाले स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छनत ?
एचआइभी संक्रमित बुवाआमाबाट जन्मने सन्तानमा एचआइभी...
हाँस्दा कसरी पुगिरहेको हुन्छ हाम्रो शरीरलाई फाइदा ?
हाँस्नु स्वास्थ्यका लागि अत्यान्तै लाभदायक छ । यो...
मानसिक तनाव, खानपानमा पश्चिमाकरण, शारीरिक परिश्रमको...
रौतहटको एक बस्तीमा डेंगुले लियो महामारीको रुप
रौतहट, २३ कात्तिक । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका १...
ओलीलाई भारतले नयाँ एजेन्टको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ : गजुरेल
अक्टोबर क्रान्ति र प्रगतिवादी वा समाजवादी यथार्थवादी साहित्य
तीन महिने अभियानबारे
भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै समाजकल्याण परिषद्, मन्त्री थापाले यसरी गरे पदको दुरुपयोग
कास्कीमा आरवाइएलको जिल्ला समिति गठन